မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Free & Easy Korea Trip Day3(Part 2): Everland -> Eating Street Foods and Exploring Gangnam
Posted by mabaydar at 1:11 AM
fb မှာ ည၁၂ခွဲနေပြီ video file လဲတင်ရသေးဘူးပြောလို့ နောက်နေ့မှတက်မယ်မှတ်တာတော် ဇွဲ.. ဇွဲ ကောင်းလိုက်တဲ့ courage တကယ်
blog ကြည့်လိုက်တော့ အသက်ကြီးလာလို့လားမသိဘူး ငယ်ငယ်ကဆို ၃ခုလောက်စီးပြီးမှ မူးတာဆိုလို့ ရယ်ရသေးတယ် .. အသက်ကြီးပေမယ့် ဝိုင်းတို့ထက်တော့သွက်ပါသေးတယ်ဟယ် ဝိုင်းဆို မဗေဒါနဲ့ရွယ်တူပေမယ့် အဲလောက် energetic မဖြစ်တော့ဘူးထင်တယ် သူ့ကိုကြည့်ရတာ သမီးလေးက စားလဲစား ကစားလဲကစား သွက်သွက်လက်လက်ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိလိုက်တာလဲ မပြောပါနဲ့တော့ ဆိုသလိုဖြစ်နေပြီ ဟားဟား ဒီမှာတော့ Thope park ကိုလက်မထပ်ခင်လွန်ခဲ့သောလေးနှစ်လောက်ကသွားလိုက်တာ Nemesis လားဘာလားမသိဘူး စီးပြီး မူးလွန်းကြောက်လွန်းလို့ နှစ်ယောက်လုံး fast pass တွေလဲဆုံး အရှုံးခံပြီးပြန်လာတယ် loser ကြီးတွေပေါ့ အမျိုးသားက ပိုတောင်ကြောက်သေးတယ်ဆိုးပါ့ ဒါနဲ့ အဲ့တုတ်ထိုးတွေစားချင်တယ်ကွယ် အခုမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိထားမိတာ ခရီးသွားပို့စ်ဖတ်တိုင်း အစားစားတဲ့နေရာအကြိုက်ဆုံးပဲ နောက်ပို့စ်လဲ စားစရာဘာစားစား ထည့်ရေးတင်ပေးနော် အတည်ပြောတာ
9/10/2014 2:51 AM
စောကြီးထပီးဖတ်သွားပီ ကြည်နူးစရာ ချစ်စရာ ဗီဒီအိုကြည့်ပီး လိုက်စီးနေရတဲ့အတိုင်းပဲ ဟိ
"အင်တာနက်ကလဲ ဂန်နမ်မှာ မြန်သလားမမေးနဲ့... ဒါတောင် Free Public wifi နော်... စကာင်္ပူကတော့ အော့ချက်မှာ အဲလို ၀ိုင်ဖိုင်ပေးနိုင်ဖို့ အတော်လိုက်ယူရအုံးမယ်... "
ညန်မာပြည်မှာဆို..ဘိုလိုလုပ်မရဲနတိဝူး။1MB-10Ksတန် ooredooတောင်တခါတလေလိုင်းကကျချင်ချင်ရယ် :D
လိုင်းမကောင်းလို့ Youtubeတော့ကြည့်ုလို့ရဝူး။အမခရီးသွားမှတ်တမ်းတွေဖတ်ရတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွားရသလိုပဲ. ^_^
9/10/2014 12:04 PM
9/10/2014 1:11 PM
Dukbokki ဆိုတာ ဘာလဲလို့ google သွားလုပ်ကြည့်လိုက်သေးတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ကိုယ်လဲ စင်ကာပူကDukbokki မကြိုက်ဖူး။ အနှစ်အရသာက တခြား Rice Cake ကတခြားဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ နောက်ပြီး ဒီက အရသာက နဲနဲချို နေသလားလို့။ ဟိုက Dukbokki ကစပ်လားဟင်? မဗေဒါ အမကတော့ တကယ် သတ္တိခဲပဲ။ ကိုယ်တော့ အသက်ကြီးလာလို့လား မသိဖူး။ အဲ့ဒါတွေ သိပ်မစီးရဲတော့ဘူး။အရင်တုန်းကစိတ်နဲ့ဆိုရင် ဘယ်လောက်မြင့်မြင့် တက်စီးကြည့်လိုက်တာပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် Disneyland သွားလည်တုန်းကတောင် roller coaster စီးမလို့ တန်းစီပြီးမှ လူတွေအော်တဲ့ အသံကြားတော့လန့်ပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဟီး။ ဪ။ ဇရာ ဇရာ။ ဒါတောင် Disneyland ထဲမှာ သရဲဟိုတယ်က ဓတ်လှေကားပျက်ကျတဲ့ Ride ကိုသွားစီးလိုက်သေးတယ်။ အဲ့ဒါတွေ့တော့ ဒီ Ride က မဗေဒါ ဘလော့မှာ ရေးဖူးတဲ့ ဂျပန် Disneyland မှာစီးခဲ့တဲ့ဟာဆိုပြီးတော့တောင် အမှတ်ရသေးတယ်။
Fast pass တွေဆုံးခံလိုက်တယ်ဆိုတာ ဘယ်က Theme park မှာလဲ... အမှန်တော့ လူကြီးတွေပါရင် စီးဖြစ်အုံးမှာ... ခုကျတော့ ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်ကိုင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်ရမှာဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိန်းတာပဲ ကောင်းမယ်လေ... အဲ့ဒါကြောင့် မလုပ်တော့တာ...
ယမ်ယမ် ရေ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... နောက်လဲ အားပေးပါ... :D
ဟီး… လိုင်းကောင်းတဲ့ အချိန်ကျ ဗွီဒီယိုလေး ထပ်လာအားပေးသွားအုံးနော်…
9/10/2014 2:01 PM
ဟုတ်… အစ်မ မဒမ်ကိုး… အစ်မရော စာတွေ ပြန်ရေးနေပြီလား… လာလည်သွားလို့ ကျေးဇူးပါ…
9/10/2014 2:02 PM
ကွန်မန့်ကို ၂နေရာလုံးမှာ ပေးသွားလို့ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ… ကိုရီးယားတွေရဲ့ Sauce ကိုက မြန်မာပါးစပ်နဲ့ဆိုရင် ချိုစပ်ကြီးလို့ပြောရမယ်... စလုံးက ထက်စာရင်တော့ စပ်တယ်... ဒါပေမဲ့ အဲဒိ ချိုတဲ့အရသာကတော့ နည်းနည်းရှိတာပဲ... ဒါပေမဲ့ ကင်ချီလိုဟာတွေ အနှစ်နဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာလဲ ပူစပ်စပ် အနှစ်က Rick cake ထဲ ၀င်တော့ စားရတာ ကောင်းပါတယ်... ကိုရီးယားစာတွေကို ပါးစပ်ကျင့်သားရသွားတာရယ် ဗိုက်ဆာနေတာရယ်ကြောင့်လဲ ပါမယ်ထင်တယ်...
9/10/2014 2:03 PM
https://www.thorpepark.com/ အဲ့ Thorpe park မှာ ဆုံးတာလေ Heathrow နားမှာရှိတယ် တန်းစီနေရင်းနဲ့ ညနေ ၄နာရီလောက်ကျစိတ်မရှည်တော့လို့ fast pass တွေဝယ်လိုက်တာ တခုနှစ်ခုစီးပြီးနောက်ဟာတွေကျ ခြေထောက်ကြီးတွေကိုလဲ တန်းလန်းချထားတာမြင်တော့ ကြောက်ပြီးမစီးတော့ဘူး အဲ့တုန်းက ဆောင်းဝင်ကာနီးဆိုတော့ အစောကြီးမှောင်တာ ညဘက်ရောက်တော့ပိုကြောက်လို့
9/10/2014 3:19 PM
Double Rock Spin ဆိုတာကြီးက ကြည့်ရုံနဲ့တင် အသည်းတွေ အူတွေတုန်တယ် အမရယ်..
ပစ်သာ အဲတာကြီးတက်စီးရရင်တော့ ..အမလေးးးလေးးးးး ....နှလုံးခုန်ရပ်မလား မသိပါဘူး...
9/11/2014 1:30 AM
အစ်မရဲ့ ခရီးသွားပို့စ်လေးကို အားရပါးရ ဖတ်သွားပါတယ်ရှင့်
ကိုယ်ကိုသာ သေချာအလုံပိတ်ထားရင် ဘယ်လောက်မြန်မြန် စီးရဲတယ်
ကုိုရီးယားက လူတွေတင် လှတာ မဟုတ်လောက်ဘူး ရှုခင်းတွေနှင့်ကြည့်စရာတွေလဲ အပျံစားဘဲ ထင်တယ်။ မရောက်ဖူးသေးတော့ ငမ်းရုံဘဲပေါ့။ မျက်ခွံပေါ်က အမာရွတ်လေး အကြောင်း စိတ်ဝင်စားတယ်။ စောင့်နေမယ်။ နောက်ပုို့စ်ကုို။
9/12/2014 2:57 AM